UMike Miller Archives - US Right to Know
Akukho Tyala Namhlanje, kodwa ibali malunga novavanyo lokugqibela
ezaposwa ngomhla Matshi 7, 2019 by UGary Ruskin
(NGAPHAMBILI: Amaqela asombulule isimangalo ngaphandle kwenkundla ngoNovemba 2019.)
Ukuphumelela kwimbali ephelileyo kwihlobo lase-California u-Dewayne "Lee" Johnson ngaphezulu kweMonsanto kunye nomnini wayo omtsha uBayer wenza iindaba kwihlabathi liphela kwaye wenza amanye amagqwetha kaJohnson abadumileyo kwizangqa zomthetho, ewawonga amabhaso kunye nodumo lwamanye amazwe.
Kodwa ngasemva kwembonakalo yoloyiso, emva kwetyala lokuqala lokuqala lomhlaza eRoundup laphosa amagqwetha kaJohnson kwidabi elisemthethweni elilelabo, ngezityholo zokuzenzela izinto, "ukunganyaniseki nokungaziphathi kakuhle," kunye nokunyelisa.
Kwityala nakwibango eliphikisayo elifakwe kwiNkundla yeSekethe yeOrange County eVirginia, iMiller Law Firm ityhola igqwetha uTim Litzenburg, umntu owayengummeli wokuqala kaJohnson, ngokubamba ulwazi lwabathengi oluyimfihlo ngenjongo yokuseka inkampani yakhe eyahlukileyo, nanjengoko wayengaphumeleli ukubonisa iintlanganiso zokulungiselela ityala likaJohnson. Isikhalazo sikwabonisa ukuba uLitzenburg uvumile ukusebenzisa iziyobisi ngexesha likaJohnson.
Isikhalazo sathi: "Amalungu aliqela eqela likaMnu. Johnson. “Xa wayevumelekile ukuphikisa isindululo phambi kweNkundla…. ukuhanjiswa kwakhe kwakudidekile kwaye kungahambelani. Amalungu eqela elichopheleyo ayenexhala lokuba uMnu. Litzenburg wayephantsi kwempembelelo yeziyobisi egumbini lenkundla… ”
Ityala ngokwalo laphela liphethwe ngamanye amagqwetha kwaye i-Litzenburg yayingekho xa kuvalwa ityala okanye umhla apho ijaji yabuyisa isigwebo se-289 yezigidi ngokuchasene neMonsanto.
Malunga nenyanga enye kamva, nge-11 kaSeptemba 2018, iMiller Firm yaphelisa ingqesho yaseLitzenburg, kugwetywa.
I-Litzenburg, ngoku eliqabane lenkampani ye IKincheloe, iLitzenburg kunye nePendleton, waziphika zonke izityholo kwaye wafaka ibango eliphikisayo elityhola ukungcoliswa komntu kunye nokuphazamiseka ngabom kwimicimbi yakhe yeshishini.
I-Litzenburg iqinisekisa ukuba amabango e-The Miller Firm ngokuchasene naye "anomdla kwaye ahlala eyintsomi" kwaye kungenxa yokoyika kwe-Miller Firm ukuba bazakuphulukana nabathengi be-Roundup kwinkampani entsha ye-Litzenburg. Ubanga ukuba unikwe i-1 yezigidi zeedola ngumsunguli oqinileyo uMike Miller ukuba ahambe kude nabathengi bakhe beRoundup kodwa wasala isipho.
IMiller Firm kunye neLitzenburg bazakuqala ukubonakala kwityala labo e-Orenji, eVirginia ngoMeyi 28.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UDewayne "Lee" uJohnson, IKincheloe Litzenburg kunye nePendleton, Mike Miller, I-Miller Law Firm, UTim Liztenburg
Indoda yeNdawo yeBay ngokuchasene neMonsanto: Uvavanyo lokuqala ngaphezulu kwamabango omhlaza we-Roundup amiselwe ukuqala
ezaposwa ngomhla Juni 19, 2018 by UStacy Malkan
UDewayne “Lee” Johnson ukhokele kwinto abaninzi abanokuthi bubomi obungummangaliso. Utata kunye nomyeni oneminyaka eyi-46 bachitha iminyaka eliqela besebenza njengomgcini wesikolo kwaye bachitha ixesha labo simahla befundisa oonyana bakhe abancinci ukuba badlale ibhola. Kodwa kule veki uthatha indawo kwindawo yengxoxo-mpikiswano malunga nokukhuseleka kwesinye sezilwanyana ezisetyenziselwa ukubulala izitshabalalisi njengoko esisa iMonsanto enkundleni yamabango okuphinda-phinda ukubulala iyeza elithandwayo lenkampani kwamshiya enomhlaza.
Umgwebi weNkundla ePhakamileyo yaseSan Francisco uSuzanne Ramos Bolanos wabelwa uMvulo ukuba ajonge ityala, kwaye ukhetho lwejaji kulindeleke ukuba luqale ngoLwesine, nge-21 kaJuni, ngeengxelo zokuvula ezinokwenzeka nge-27 kaJuni. Ukubonakaliswa kwenkundla kungagcina iiveki ezintathu ukuya kwezine, amagqwetha abandakanyeka kuqikelelo. , kwaye iya kukhanyisa ukukhanya kumashumi eminyaka yophando lwezenzululwazi kunye namaxwebhu angaphakathi eMonsanto ahambelana nokuvavanywa kunye nokuthengiswa kwe-Monsanto's flagship herbicide kunye nesithako esisebenzayo, ikhemikhali ebizwa glyphosate.
Nangona uJohnson engummangalelwa yedwa kwi ityala, ityala lakhe lithathwa njenge-bellwether malunga ne-4,000 yabanye abamangali ukumangalela IMonsanto ngenxa yezityholo zokuba ukubhengeza iRoundup kubangele bona okanye abo babathandayo ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL). Elinye ityala limiselwe ukuba lixoxwe ngo-Okthobha eSt. Louis, eMissouri.
UJohnson usebenze njengomgcini webala kwiSithili seSikolo esiManyeneyo saseBenicia iminyaka emininzi.
Izityholo, eziye zafumba kwiidokodo zenkundla ejikeleze i-US, ayiceli mngeni nje kwisikhundla sikaMonsanto sokuba iyeza elisetyenziswa ngokubanzi libonakalise ukuba likhuselekile, kodwa bakwatsho ukuba inkampani icinezele ngabom ubungqina bengozi yemveliso yayo yokubulala ukhula, ilahlekisa bobabini abalawuli kunye nabathengi kwinkohliso eyingozi.
Isimangalo, siqhubeka kwiinkundla zomdibaniso nezaseburhulumenteni, zaqala emva kwe-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) yahlulahlula i-glyphosate-isithako esisebenzayo kwiRoundup- njenge Isidumbu somntu ngo-Matshi 2015. Ulwahlulo lwe-IARC lwalusekwe kwiminyaka epapashiweyo, uphononongo olwenziwa ngontanga lwezifundo zesayensi ezihlalutya i-glyphosate kunye ne-glyphosate-based herbicides.
IMonsanto kunye nabadibaniselwano bayo kwishishini le-agrochemical baye baqhwaya isimangalo kunye nohlelo lwe-IARC njengokusilela kokusebenza, ngokuchasene nokuba amashumi eminyaka ezifundo zokhuselo zingqina ukuba i-glyphosate ayibangeli mhlaza xa isetyenziswe njengoko iyilelwe. IMonsanto icaphule iziphumo ze-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yase-US (i-EPA) kunye nabanye abasemagunyeni njengolawulo lokuxhasa ukuzikhusela. Inkampani inokukhomba kwi Uvavanyo loyilo lomngcipheko we-EPA yeglyphosate kwicala layo, eyagqiba ukuba i-glyphosate akunakwenzeka ukuba ibe ngumhlaza.
"Imichiza yokubulala ukhula esekwe eGlyphosate ixhaswa yenye yezona ndawo zibanzi zempilo yoluntu kunye nezendalo ezakhe zaqulunqelwa imveliso yeyeza lokubulala izinambuzane," IMonsanto ithi kwiwebhusayithi yayo. "Uhlolisiso olubanzi lwezinto eziyityhefu nezokusingqongileyo olwenziwe kule minyaka ingama-40 idlulileyo luye lwabonisa ngokuphindaphindiweyo imeko yokhuseleko lwesi sifo esasetyenziswa ngokubanzi."
IGlyphosate imele zigidi zeedola Kwingeniso yonyaka yeMonsanto, ethi waba yinkxaso-mali ye-Bayer AG esekwe eJamani nge-8 kaJuni, kunye nezinye iinkampani ezithengisa i-glyphosate-based herbicides. IMonsanto yazisa iyeza lokubulala izitshabalalisi kwintengiso ngonyaka we-1974 kwaye umbulali wokhula usetyenziswe ngokugqamile kumashumi eminyaka ngamafama kwimveliso yokutya kunye noomasipala ukuphelisa ukhula kwiipaka zikawonkewonke nakwiindawo zokudlala, nangabanini bamakhaya kwingca yokuhlala.
IMonsanto yayinayo wafuna ukulibazisa Ityala likaJohnson, njengoko liye lafuna ukulibaziseka kunye / okanye ukugxotha abanye abaziswe ngokuchasene nalo. Kodwa ityala lakhawuleziswa kuba kunjalo ayilindelwanga ukuba iphile ixesha elide emva kokufunyaniswa ngo-2014 ngohlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma ebizwa I-mycosis fungoides.
Ngokweengxelo zenkundla, UJohnson wasebenza njengomgcini-mhlaba weSithili seSikolo esiBumbeneyo saseBenicia iminyaka emininzi kwaye wasebenzisa unyango oluninzi lwezifo zokubulala ukhula eMonsanto kwizakhiwo zesikolo saseSan Francisco ukusuka kwindawo ka-2012 kude kube sekupheleni konyaka ka-2015, kubandakanya emva kokuba efunyaniswe enomhlaza ngo-Agasti ka-2014. Umsebenzi ubandakanya ukuxuba kunye nokutshiza amakhulu eetoni ze-glyphosate-based herbicides ejikeleze iipropathi zesikolo. Usebenzise iimveliso ezahlukeneyo zeRoundup, kodwa ubukhulu becala iRoundup Pro, inguqulelo egxile kakhulu kumbulali wokhula. Emva kokuphuhlisa irhashalala lolusu ehlotyeni lika-2014 waxela koogqirha ukuba kwabonakala ngathi kuya kusiba mandundu emva kokutshiza iyeza lokubulala ukhula. Ngo-Agasti waloo nyaka wafunyaniswa enoluhlobo lwe-lymphoma kodwa waqhubeka nomsebenzi wakhe de kwaba ngu-2015 xa wayifumana imijikelo emininzi ye-chemotherapy kuphela ukuze afunde ngo-Septemba 2015 ukuba wayenokuba neenyanga ezili-18 kuphela zokuphila.
Kwidiphozithi ethathwe ngoJanuwari, Ugqirha onyanga uJohnson wangqina ukuba ngaphezulu kweepesenti ezingama-80 zomzimba wakhe zazigqunywe zizilonda kwaye ukuxilongwa kwakhe kwaqhubeka nokuba sisiphelo. Okwangoku, uJohnson uphucule okoko eqala unyango lwamachiza amatsha kwaye uceba ukuya kolunye uvavanyo xa kunokwenzeka, amagqwetha akhe athi.
UJohnson akakhokelanga kubomi obungenasiphako; IMonsanto zi tyhilile ityala lokuhlaselwa elirhabaxa nxamnye naye kwii-1990s zakuqala, kunye nentlawulo yezixhobo ezingafanelekanga kunye nesikhalazo sokuphathwa gadalala kwasekhaya ngakumama womntwana wakhe omdala. Inkampani yacela ubungqina bokufaka imali kuJohnson ukuba wasilela kuvavanyo lwabafakizicelo bokubulala izitshabalalisi izihlandlo ezithathu, kwaye wafafaza isibulali zinambuzane ngaphandle kwelayisensi yokufaka isicelo UJohnson wayenxibe iimpahla ezifanelekileyo zokukhusela ngaphezulu kwempahla yakhe kodwa ngengozi wafakwa kwi-pesticide ubuncinci kube kanye xa wayeyixuba.
Amagqwetha kaMonsanto aya kuthi ezinye izinto zinokubekek 'ityala ngomhlaza kaJohnson, kwaye umbulali walo wokhula akazange adlale ndima.
Amagqwetha kaJohnson ayikhuphile nayiphi na imiba malunga nokuziphatha kukaJohnson okanye ezinye izizathu ezinokubangela isifo sakhe, kwaye bathi kwiifayile zenkundla baya kunika ubungqina kwityala lokuba iMonsanto "amashumi eminyaka, ebandakanyeka kwinqanaba elothusayo lobuqhetseba bezenzululwazi kunye nokuphathwa koncwadi lwezenzululwazi. ngokubhekisele kwiRoundup ”ukugubungela ubungqina bokuba ibangela umhlaza.
Ubungqina bokulingwa buza kubandakanya ulwazi lokuba iMonsanto ghostwrote amanqaku axhomekeke kwi-EPA, IARC kunye nabalawuli bommandla waseCalifornia; abasebenzi abanembuyekezo yokubhala ngokuzibhala; kwaye ndikucinezele ngokubonakalayo ukupapashwa kolwazi oluveze ingozi edibene ne-glyphosate kunye neRoundup. Amagqwetha kaJohnson athi amaxwebhu angaphakathi eMonsanto abonisa “ubuqhetseba” obuninzi berekhodi yesayensi, kunye nokusebenzisana okungafanelekanga ngobuqhetseba nabalawuli.
Amagqwetha kaJohnson uzimisele ukubiza I-10 yangoku kunye nababesakuba ngabasebenzi beMonsanto kwisitendi.
“Sizakubalanda apha. Sinazo iimpahla, ”utshilo uBrent Wisner, ongomnye wamagqwetha amathathu amele uJohnson etyaleni. "Ukuba ubungqina esinabo buvumelekile, iMonsanto isengxakini."
U-Wisner waziswa kuphela ukunceda ukuzama ukuvavanya ityala kwezi veki zimbalwa zidlulileyo emva kokuba igqwetha elikhokelayo u-Mike Miller lifumene ingozi ebulalayo ngelixa ikite isasaza kwaye ihlala yonzakele kakhulu ukuzama ityala. Indima kaWisner ibalulekile njengoko emiselwe ukuhambisa zombini iingxelo zokuvula nokuvala zetyala likaJohnson xa uMiller engekho.
IMonsanto Ifayile isindululo Nge-18 kaJuni efuna ukukhupha uWisner ekuzameni eli tyala, nangona kunjalo, esithi ubesebenza njenge- "PR man," kunye ne-lobbyist ngokuchasene ne-glyphosate, ngakumbi eYurophu, apho i-glyphosate ibiphantsi kovavanyo olunamandla. UMonsanto ukwacaphule ukukhutshwa kukaWisner ngo-Agasti 2017 wamakhulu amaphepha amaxwebhu angaphakathi eMonsanto aguqulwe ekufumaniseni ukuba inkampani yayifuna ukugcina itywinwe, iqhinga elathi lafumana uWisner ukukhalinyelwa ngumgwebi kwityala lezobumbano elalisalinde iMonsanto. Amagqwetha kaMonsanto aphikisa ukuba unxibelelwano lwangaphakathi lwenkampani lwenziwe ngabom ngaphandle komxholo nguWisner namanye amagqwetha ommangali ukuyenza ibonakale ngathi inkampani iyazikhohlisa xa ingazange.
Imisebenzi kaWisner yambeka ekwaphula umthetho waseCalifornia othi "amangqina-amangqina", uMonsanto waphikisana nokugcwaliswa kwawo.
UAraceli Johnson, umfazi kaLee Johnson, kunye noonyana babo ababini. Iikhredithi zeefoto: U-Lee Johnson
Ukongeza ekuzameni ukukhuphela ngaphandle igqwetha, uMonsanto ufuna ukubekela bucala ubungqina, kubandakanya ii-imeyile zangaphakathi ezibhalwe ngoososayensi, iingxoxo zokuba ikhohlisile i-EPA, ubungqina bobuqhetseba obenziwe ziilebhu, kunye nobungqina obuvela kwingqina likaJohnson.
Ujaji Bolanos uzokumamela iingxoxo ngolwe-Lwesithathu malunga nesisindululo kunye nabanye abangaphezulu kweshumi elinambini malunga nobuphi ubungqina obuzokuvunyelwa ekuxoxweni.
Omabini amacala athi ityala kunye nesiphumo zibalulekile ngengqondo enkulu. Ukuba ijaji ifumana ukuthanda uJohnson inokukhuthaza isimangalo esongeziweyo kunye nomonakalo wamabango amanye amagqwetha abandakanyekayo aqikelele ukuba angafikelela kumakhulu ezigidi zeedola. Ukuba amajaji ajongene neMonsanto, amanye amatyala anokuba sengozini. Ukongeza, ukuphumelela kweMonsanto kweli tyala lokuqala kunokulula imibuzo yolawulo ukuqhuba inkampani.
Ngokuphathelele uJohnson, uza kuzama ukuya kolunye uvavanyo, kwaye azokungqina, kodwa ngekhe abekho kuzo zonke, utshilo uWisner. Unkosikazi kaJohnson, u-Araceli Johnson, uzakubizwa azokungqina, kunye nabo babini asebenza nabo kunye noogqirha bakhe.
“Kungoku nje ukwixesha lokubolekwa. Akazukuza kulinga oluninzi, ”utshilo uWisner. “Umfo uzakufa kwaye akukho nto anokuyenza ngayo. Ayothusi loo nto. ”
Eli nqaku iposwe kuqala kwi-EcoWatch. UCarey Gillam ngu intatheli kunye nombhali, kunye nomphandi woluntu onomdla Ilungelo lase-US lokwazi, iqela lophando lokutya elingenzi nzuzo.
Ukutya kwengqondo, Uphando lwethu, Pesticides Bayer AG, UBrent Wisner, UDewayne "Lee" uJohnson, EPA, glyphosate, IARC, Mike Miller, IMonsanto, Yisonge yonke